Xaflad Lagu Daah Furayay Wareegii 3aad ee Ololaha Talaalka Cudurka Dabaysha (Polio) oo ka dhacay Hoolka Shirarka xafiiska haweenka ee xarunta deegaanka jijiga. - Cakaara News
Xaflad Lagu Daah Furayay Wareegii 3aad ee Ololaha Talaalka Cudurka Dabaysha (Polio) oo ka dhacay Hoolka Shirarka xafiiska haweenka ee xarunta deegaanka jijiga.
Jigjiga(CN) Isniin August-24.Waxaa, guud ahaanba ka bilowday deegaanka wareegii 3aad ol olaha talaalka cudurka dabaysha (polio) oo lagu talaalayo caruurta da’doodu kahoosayso 5 sano iyadoona guud ahaan dalka gaar ahaana ddsi ay WHO cadaystay in lagu guulaystay dabargoynta dabaysha.
Haddaba munaasabadii lagu daah furayay wareega 3aad ee ol olaha talaalka cudurka dabaysha oo uu si meeqaam sare ah u soo diyaariyay xafiiska caafimaadka DDSI oo kaashanaya wasaarada caafimaadka ee JDFI iyo hay’adaha ay bahwadaagta yihiin xafiiska ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee xafiiska arimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI.
Waxaana, ka soo qayb’galay furitaankii xafladaasi qaarka mid ah masuuliyiinta xukuumada DDSI oo uu ka mid yahay, wasiir ku xigeenka caafimaadka ahna ku simaha wasiirka caafimaadka DDSI mudane cabdifataax siciid, wasiirka haweenka, caruurta iyo dhalinyarada DDSI marwo raxma suuldaan maxamuud haybe, wasiir ku xigeenka xidhiidhka arimaha dawlada dhaqanka iyo dalxiiska DDSI mudane Baashe Cabdi ismaaciil, gudoomiyaha arimaha islaamka DDSI sheikh cabdiraxmaan maxamed shaqaalaha xafiiska caafimaadka kooxda fanka iyo suugaanka DDSI, masuuliyiin iyo marti sharaf kale.
Waxaana ugu horayntii ka hadlay xafladaasi wasiir ku xigeenka caafimaadka ahna ku simaha wasiirka caafimaadka DDSI mudane cabdifataax siciid oo sharax dheer ka bixiyay istaraatajiyadaha, siyaasada iyo qorshyaasha xafiiska caafimaadka ee ku wajahan ka hortaga iyo dabar go’gaynta cudurada faafa, sidaasi darteedna talaalkan cudurka dabaysha looga talaalayo xaruurta da’doodu ka yartahay 5ta sano ay tahay ka midho dhalinta hirgalinta qorshyaasha dhankasta leh. Sidoo kale waxa uu sheegay in guud ahaanba dalkeena itoobiya gaar ahaana deegaankeenu uu guulo waawayn ka soo hooyay xaqiijinta dabar goynta iyo ka hortaga cudurka dabaysha, Wuxuuna Ku simaha wasiirka caafimaadku ku booriyay bulshada deegaanka in ay ka qayb’qaataan ol olaha talaalka cudurka dabaysha una diyaariyaan caruurta maadaamo oo ay xirfadlayaasha caafimaadka guri’guri u gaadhayaan.
Ku xigeenka wasiirka xidhiidhka arimaha dawlada dhaqanka iyo dalxiiska DDSI mudane baashe cabdi ismaaciil oo ka hadlay munaasabadasi furitaanka wareega 3aad ayaa sheegay in jihooyinka iyo qorshyaasha xukuumada DDSI ee k u qotoma dhinaca caafimaadku yihiin kuwo ku salaysan xaqiijinta cidhibtirka cudurka Dabaysha iyo sii xoojinta hawlgalada hortaga cudurada faafa.
Dhankooda masuuliyiintii kale oo ka hadashay furitaankii xafladan ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka arimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI marwo raxma suldaan maxamuud haybe iyo gudoomiyaha arimaha islaamka DDS mudane sheikh cabdiraxmaan kuwaasi oo si balaadhan uga warbixiyay ahmiyada uu leeyahay talaalkani lagaga hortagayo cudurka dabaysha (polio).
gababagadii xafladaasi ayaa waxa uu wasiir ku xigeenka caafimaadka ahna ku simaha caafimaadka DDSI mudane cabdifataax siciid uu dhibicdii ugu horaysay ee wareegan 3aad ku talaalay qaarka mid ah caruurtii loogu talagalay talaalkani